Drostanolone Enanthate CAS 472-61-145 အစုလိုက် စက်ဘီးစီးခြင်း Drolban Masteron Steroid Powder
ဖော်ပြချက်-White Crystalline Powder ၊
တင်ပို့မှု-HKEMS၊ EMS၊ Fedex၊ DHL၊ EUB
အလင်းတန်း-anabolic steroid အမှုန့်၊ ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်မှု စတီရွိုက်များ
Drostanolone Enanthate(Masteron E) ဖော်ပြချက်
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလောကတွင် အသုံးမပြုမီ၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား ကုသရန်အတွက် စတီးရွိုက်တစ်မျိုးလုံးကို အများစုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။70's နှင့် 80's များအတွင်းတွင်သာ ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်အန္တရာယ်မရှိသော အခြေအနေများကဲ့သို့ အပန်းဖြေရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အထူးသဖြင့် Masteron သည် စတီးရွိုက်များဖြစ်သည်။Drostanolone Propionate ကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း၏ လုပ်အားခနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ရပ်ဆိုင်းထားစဉ်အတွင်း လုပ်သားစျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်အားကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်စက များစွာနိမ့်ကျသည်။ထို့ကြောင့် Drostanolone Enanthate သည် FDA အသိအမှတ်ပြု စတီးရွိုက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းကို အမေရိကန်ပြည်တွင်းတွင် မထုတ်လုပ်ပါ။၎င်းကို တရုတ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့ နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Drostanolone Enanthate သံသရာရလဒ်များ
Drostanolone enanthate cycle တွင် အပန်းဖြေအသုံးပြုရန်သုံးသော steroids အမျိုးအစားတွင် Masteron Enanthate သည် ပျော့ပျောင်းသည်။Masteron သောက်သုံးခြင်းမှ သင်ရရှိသောရလဒ်များသည် သိသာထင်ရှားသော်လည်း ၎င်းတွင် ပြင်းထန်ပိန်ကြုံးသောကြွက်သားထုထည်တွင် အကန့်အသတ်မရှိပါဝင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် Trenbolone ကဲ့သို့ "အမာခံ" မဟုတ်ပါ။ဤစတီရွိုက်နှစ်မျိုးလုံးသည် ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်သူများအား ပိန်သောကြွက်သားတစ်သျှူးများကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်၊ Masteron၊ နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် အန္တရာယ်နည်းပါးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသလား။ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သင်ရနိုင်သော IV နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် ၎င်းကို ဗီတာမင်အေထုတ်လွှတ်မှု နှေးကွေးစေသည်ဟု ယူဆပါ။
Drostanolone Enanthate (Masteron E) စီမံခန့်ခွဲမှု
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသားများအတွက် စံ Masteron ပမာဏသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် 300-400mg အတွင်း ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ၎င်းသည် 100mg ကို တစ်နေ့ခြားတစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း 6-8 ပတ်ကြာ ထိုးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။၎င်းသည် 6-8 ပတ်သည် စုစုပေါင်းစက်ဝန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် ၎င်းသည် stack တစ်ခု၏ Masteron အပိုင်းအတွက် ဘုံအချိန်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။အချို့သူများသည် ၎င်းတို့၏ဆေးပမာဏကို နေ့စဥ်အချိန်ဇယားအဖြစ် ပိုင်းခြားရန် ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း တစ်ရက်ခြားတိုင်း လုံလောက်သင့်သည်။Drostanolone Enanthate ဗားရှင်းကို တွေ့ရှိပါက တစ်ပတ်လျှင် 1-2 ထိုးဆေးသည် အလုပ်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထိုဗားရှင်းသည် အနည်းငယ် ရှားပါသည်။
အမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာကုသမှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းပမာဏ 100mg ကို ရက်သတ္တပတ် 8-12 ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုသည်။၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည့် virilization လက္ခဏာများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။သို့သော် ကင်ဆာထက် ပိုကောင်းသေးသည်ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။အမျိုးသမီးအားကစားသမားအတွက်၊ တစ်ပတ်လျှင် 50mg သည်စုစုပေါင်း 4-6 ပတ်အတွက်လုံလောက်သင့်သည်။အချို့သောအမျိုးသမီးများသည် ဟော်မုန်းကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိလျှင် တစ်ပတ်လျှင် 100mg နှင့် နီးကပ်သောဆေးများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ဤအကွာအဝေး၏ ပမာဏကို အမျိုးသမီးအများစုအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်သင့်သော်လည်း တစ်ဦးချင်း အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို သတိရနေရပါမည်။တစ်ပတ်လျှင် 100mg အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု 4-6 ပတ်ထက်ကျော်လွန်သော ပမာဏများသည် အချို့သောအဆင့်တွင် virilization လက္ခဏာများထက် ပိုများပါသည်။
Drostanolone Enanthate(Masteron E) သတ်မှတ်ချက်များ
စမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစံနှုန်း ရလဒ်များ
ဖော်ပြချက် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဖြူနီးပါး အဖြူပုံဆောင်ခဲမှုန့် White Crystalline Powder ၊
အရည်ပျော်မှတ် 63 ℃—69 ℃ 65 ℃—68 ℃
အတိအကျလှည့် + 20º— + 30º +25.6°
အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု ≤0.5% 0.32%
မီးကြွင်းကျန် ≤0.1% ၀.၀၂%
ဆန်းစစ်ချက် ≥97% 99.7%
ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်/ အကြောင်းရင်း ၇ ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ဆေးဝါးနှင့် ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထိပ်တန်းပေးသွင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ထုပ်ပိုးမှုသည် အကောက်ခွန်ကို လုံခြုံစွာဖြတ်ကျော်ရန် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ် သင့်တွင် ကိုယ်ပိုင်စံပြနည်းလမ်းရှိလျှင် ၎င်းကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် အာမခံချက် ၊ ကုန်ပစ္စည်းမတင်ပို့မီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် forwarder လုံခြုံရေး EMS/DHL/TNT/FedEx/UPS၊ AusPost၊
Royal Mail အမြန်၊ စသည်တို့ကို တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ရှိသောကြောင့် ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့် အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ နွေးထွေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
8 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါမည်။
မှာယူမှုကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်သည့်အခါ လျှော့စျေးပေးပါမည်။နောက်အော်ဒါများအတွက် VIP စျေးနှုန်း။
1. ကျေးဇူးပြု၍ သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ပစ္စည်းများနှင့် မှာယူမှုအရေအတွက်ကို ပြောပြပါ၊ သင့်အား ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းပါမည်။ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြပါ (ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း စသည်ဖြင့်) မင်းအတွက် ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ မင်းကိုပြောပြမယ်။
2. ကျေးဇူးပြု၍ ပို့ဆောင်ခနှင့် ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြောပြနိုင်စေရန်အတွက် သင့်သင်္ဘောလိပ်စာကို ပြောပြပါ။
3.ထို့နောက် သင့်မှာယူမှုကို အတည်ပြုသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်ကို ပေးပို့ပါမည်။
4. သင့်မှာယူမှုကို သင့်ငွေပေးချေပြီးပါက ပို့ဆောင်သူထံ ချက်ချင်းပေးပို့ပါမည်။ပြီးတော့ ပို့ဆောင်သူက 24 နာရီအတွင်း ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။Tracking NO ကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။2 ရက်အတွင်း။
5. သင့်ပက်ကေ့ဂျ်အတွက် လက်မှတ်ထိုးပါ။
6. သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် သင့်တုံ့ပြန်ချက်ကို ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပါ။
ID ကုသိုလ်ကံ စွမ်းရည်
8 တက်စတိုစတီရုန်း Sustanon(TS) 100mg/ml
9 Testosterone Base (စမ်းသပ်မှုအခြေခံ) 100mg/ml
10 SU-400 (TP၊ TIS၊ TPP၊ TDECA) 400mg/ml
11 Sustanon 250 (TP၊ TIS၊ TPP၊ TDECA) 250mg/ml
12 Testosterone Blend300(TE၊TP) 300mg/ml
13 Testo-600 (TA၊ TPP၊ TC) 600mg/ml
14 TRA100 (Acetate ရထား) 100mg/ml
17 TRX100(Tren Hex ကာဗွန်နိတ်) 100mg/ml
18 Trenmix200 (အကြား၊ သုံးခု) 200mg/ml
19 TRB50 (အခြေခံရထား) 50mg/ml
20 Tren ဆိုင်းထိန်းစနစ် (Trenbolone Suspension) 100mg/ml
21 Blend300(TRA၊DP၊TP) 300mg/ml
22 Blend375 (TRE၊ DE၊ TE) 375mg/ml
23 Blend500 (TRE၊ DE) 500mg/ml
28 NANDROMIX-300 (NPP၊ ကလေး) 300mg/ml
31 Stanozolol ရေနံအခြေခံ 50mg/ml
32 Stanozolol ရေနံအခြေခံ 100mg/ml
33 Stanozolol ဆိုင်းထိန်းစနစ် 50mg/ml
34 Stanozolol ဆိုင်းထိန်းစနစ် 100mg/ml
35 BU200(Boldenone Undecylenate၊ Equipoise) 200mg/ml
36 BU300(Boldenone Undecylenate၊ Equipoise) 300mg/ml
37 BU600(Boldenone Undecylenate၊ Equipoise) 600mg/ml
38 Maseron 100 (Drostanolone Propionate၊ DP) 100mg/ml
39 MAST200 (Drostanolone Enanthate၊ DE) 200mg/ml
ယခင်- Drostanolone Enanthate Powder DE Legal Masteron E Steroid သည် ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက် CasNO.303-42-4
နောက်တစ်ခု: Masteron E Powder CAS 472-61-145 ထိရောက်သော Anabolic ကာယလေ့ကျင့်ခန်း Steroids ဖြည့်စွက်စာ Drostanolone Enanthate
anabolic steroids အမှုန့်
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း Anabolic Steroids
Drostanolone Enanthate Powder ၊
Male Enhancement Powder ၊
Masteron E Powder ၊
Drostanolone Enanthate Powder 99.1% Masternon...
99% Drostanolone Enanthate အဖြူရောင်အရည်ကြည်တည်ဆောက်ခြင်း...
Mast အတွက် Drostanolone Enanthate လက်ကားစျေးနှုန်း
Drostanolone Enanthate Powder DE တရားဝင် Masteron...
Mast 200 ထိုးဆေး Anabolic Steroids အဝါရောင် Se...